Yabụ na ị bụ onye egwu na-achọ ime nkwupụta na ntanetị ma ị na-eche echiche ime ka usoro njikarịcha ọchụchọ (SEO) rụọ ọrụ maka gị? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, gwazie gị na, ebe enweghị mgbagha anwansi na njikarịcha njin ọchụchọ, ọ gaghị esikwa ike melite ọhụhụ ọchụchọ gị n'ime Google na Bing.
Gingde blọgụ bụ ụzọ dị mma iji mee ka ngwa ọrụ nchọta ahụ gị. Naanị jide n'aka na e debara aha weebụsaịtị gị n'akwụkwọ na isi injin (Google, Yahoo !, na Bing) yabụ na ha maara na ị na-agagharị na saịtị gị ma depụta ihe ị debere.
Mgbe ị na-ede blọgụ, jide n'aka na ị na-eji ọdịnaya juputara na okwu (nke ahụ bụ naanị buzzphrase nke pụtara "jiri isiokwu ugboro ugboro na ọdịnaya gị"). Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị na - ede blọgụ maka bass clarinet, ọ kachasị mma iji ahịrịokwu ahụ“ bass clarinet ”na aha ya na oge ole na ole n’ime ya.
Ọ bụrụ n ’ị na - ede blọgụ (yabụ na ị ga - ahụ, lee anya n’elu) gbasara isiokwu metụtara egwu (ngwa egwu gị, ụda olu gị dị egwu, ndị ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ ndị otu a ma ama, ndị na - eme ihe egwu, wdg.) Mgbe ahụ ị bụ, na nkọwa, ọ bụ onye edemede. Mana ọ dị mkpa ka ị gafee karịa ịbụ onye edemede ma bụrụ onye Google chepụtara.
Iji mee ka nke ahụ mee, ị ga-ebu ụzọ nweta akaụntụ Google+ (ọ dị mma ịsị na ịnwe akaụntụ Google ga-enyere gị aka SEO kwa, n'ihi na Google doro anya na ngwaahịa Google). Na profaịlụ akaụntụ Google gị, ị ga-ahụ ngalaba “Onye ntinye aka” n’okpuru “Njikọ.” Gbaa mbọ hụ na e dejupụtara URL na aha weebụsaịtị ndị ị na-ede (hụ na itinye blọgụ nke gị).
Ohere dị mma na ọdịnaya gị ga-agụnye ihe oyiyi. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, yabụ mgbe ọ bụla ị tinyere ihe onyonyo na ọdịnaya gị, ị kwesịrị itinye nkọwa nke onyonyo ahụ na njirimara "alt". Nke a bụ otu ị si 'agwa' ụlọ ọrụ ọchụchọ ihe dị na oyiyi ahụ; ha amachaghị nke ọma iji ghọta ihe onyonyo niile site na ọdịnaya pixellated. Enwere ike iji isi okwu gị na nkọwa a.
Ọzọkwa, ịnwere ike itinye vidiyo Youtube gị ozugbo na blọọgụ gị. Nke a nwere ike ime ka ọdịnaya blog gị dịkwuo mma (nke a bụ a nnukwu ihe atụ). Gbalia igbado vidiyo na isi okwu ndi anyi n’ekwu.
Nchịkọta Google bụ ụzọ dị mma iji nyochaa arụmọrụ (ma ọ bụ enweghị ike ọ bụla) nke usoro njikarịcha gị. Gbalia na edenyere aha gi na Google Analytics. Gaa na ya ugboro ugboro ma hụ ihe na-eme ka okporo ụzọ gị gaa na saịtị. Iwu dị mfe ebe a bụ: ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, mee ya karịa na ihe ọ bụla anaghị arụ ọrụ, kwụsị ime ya. Dị Mfe, nri?